Ciidanka Maraykanka oo hub ku qabtay biyaha gacanka cadmeed | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidanka Maraykanka oo hub ku qabtay biyaha gacanka cadmeed
Ciidanka Maraykanka oo hub ku qabtay biyaha gacanka cadmeed
Ciidanka badda ee Maraykanka ayaa gacanta ku dhigay boqollaal hub fudud ah oo ay ku jiraan qoryaha AK-47, kuwaasoo saarnaa doon aan wax calan ah sidan oo maraysan gacanka Cadmeed, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda difaaca ee Maraykanka.
Saraakiisha oo ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa sheegay in arrintaas ay dhacday qiyaastii laba todobaaad ka hor.
Waxay sheegeen in ciidan la socday markabka USS JasonDunham ay fuuleen doonta. Doontaas ayaa ahayd nooca yaryar ee saxiimadaha ah.
Sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo halka hubkaas loo waday, wuxuuse sheegay inay baarayaan.
Gacanka cadmeed ayaa ka mid ah marinnada ugu mashquulka badan ee Yurub, Aasiya, iyo bariga dhexe ku xira Yemen oo dhanka waqooyooi ah iyo Soomaaliya oo dhanka koofureed ah, iyo badda Arabian oo dhanka bari ah.
Sarkaalkaas ka tirsan waaxda difaaca ee Maraykanka wuxuu kaloo sheegay in ciidanka badda ee Maraykanka iyo maraakiibta dalalka xulafadooda ah ay hore u qaadeen hawlgallo noocaas ah, ayagoo qabtay doomo siday daroogo oo nawaaxigaas marayey.
Previous articleMadaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo casuumad u fidiyay Trump
Next articleGuddoomiyihii hore ee Degmada Faraweyne oo xilka ku wareejiyey Madal Wax-qabadkiisa looga Markhaati-kacay